४ सेकेण्डमै अरुलाई इम्प्रेस पार्ने सरल तरिकाहरु - Nepali Online News Media-shikharnews.com
४ सेकेण्डमै अरुलाई इम्प्रेस पार्ने सरल तरिकाहरु
२०७६ साउन ८ बुधवार
कुनै कुुनै समयमा, अवस्थामा यो एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ कि कुनै कामको अन्तरवार्ता दिदा पहिलो इम्प्रेसन पार्न निकै गाह्रो हुन्छ । किनकि तपाइ उक्त समय निकै नर्भस हुन सक्नुहुन्छ । यदि तपाइ चाहनुहुन्छ कि मानिसहरु तपाइलाई छोटो समयमै मन पराउन् । तर त्यसको लागी तपाइ बिलकुलै आत्तिने खालको हुनुहुन्छ भने तपाइलाई गाह्रो पर्न सक्छ ।
यदि तपाइ कुनै पनि मानिसको सामुने उभिएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाइलाई यो सरल नै हुन्छ । निकोलस बुटम्यान जो सँसारको एक फेस टु फेस कम्युनिकेसनका लिडिँग म्यान रहेका छन्, उनले आफू सँग भेटिएका मानिसलाई चाँडो भन्दा चाँडो कसरि आकर्षित गर्ने भन्ने बारेमा लेखिएको एउटा किताबमा पहिलो पटक भेटिएको मानिसलाई कसरि आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केहि टिप्सहरु दिएका छन् ।
१. बडि ल्यांग्वेज
सबैभन्दा पहिला कुनै पनि मानिससँग भेट हुँदा तपाइले आफ्नो बडि ल्यांग्वेज एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ । तपाइको बडि ल्यांग्वेजले तपाइको फ्रस्ट इम्प्रेसनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तपाइको ध्यान जहिले पनि आफू सँग बोलिरहेको मान्छेतिरै हुनु पर्छ र तपाइले कुरा गर्दा तपाइको हात बाँध्ने जस्ता काम गर्नु हुदैन यसले तपाइलाइ उ प्रति रुचि भएको जनाउँछ ।
२. आई कन्ट्याक्ट (तपाइको हेराई)
छोटो समयमा कुनै पनि मानिसलाई आकर्षित गर्नमा तपाइको हेराइले पनि उतिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यदि तपाइले घुरेको जस्तै गरेर हेर्नू भयो भने पनि यो सम्भव हुन सक्दैन । तपाइले कुरा गर्दा जहिले पनि आफूसँग कुरा गरिरहेको व्यक्तिको अाँखामा अ्राँखा जुधाएर गर्नुभएमा दोस्रो व्यक्तिमा यो प्रभाव पर्छ कि तपाइ उ प्रति रुचि राख्नुभएको छ । त्यसैले जहिले पनि तपाइको हेराइ सकरात्मक तवरको हुनुपर्छ ।
३. स्माइली फेस
यदि तपाइको मुस्कुराइ रहने खालको बानी छ भने तपाइका साथिहरु धेरै हुन सक्छन् । स्माइली फेस हुनेहरु धेरैका साथिहरु धेरै नै हुने र सबैले मन पराउने खालका हुन्छन् । यदि तपाइको फेस स्माइली छ भने मानिसहरु आकर्षित हुन धेरै समयनै लाग्दैन् । कुनै पनि मानिसलाई पहिलो पटक नै भेट्दा मुस्कुराउनु भयो भने पनि यसले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ इम्प्रेसनमा । तपाइको रिलेसन तपाइको मुस्कान सँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
४. तपाइको सँस्कार
तपाइले कुनै पनि मानिसलाइ पहिलो पटक भेट्दा कस्ताो व्यवहार देखाउनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि तपाइको इम्प्रेसनमा दख्खल पुर्याउँछ । निश्चित गर्नुहोस कि तपाइले कुनै पनि मानिससँग हात मिलाउनु भन्दा पहिला केहि भन्नुहुन्छ, यसो गर्नाले विपरित मानिसलाई राम्रो असर पुर्याउँछ । अनि त्यसपछि हात मिलाउनुहोस्, नाम सोध्नुहोस् र भन्नुहोस् भेटेर खुसी लाग्यो ? यसमा तपाइले उस व्यक्तिको नाम भन्न नबिर्सनुहोस, तपाईले उसको नाम लिनु भयो भने उसलाई पनि लाग्छ कि या मान्छेको आफूतिर रुचि छ यी स साना कुराहरुले तपाइको इम्प्रेसनमा राम्रो प्रभाव पार्दछ ।
५. झुक्ने बानी
तपाइको शरीर पूर्ण रुपमा सिधा नभई केहि तवरले झुकेको छ भने पनि यसले सकरात्मक इम्प्रेसनमा सहयोग पुर्याउँछ । कुरा गर्ने क्रममा यदि तपाइ बसेर कुरा गर्नु भएको छ भने अडेस नलगाइ बसेर कुरा गर्नु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ ।
महिलामैत्री नगरबस सञ्चालन गर्दै उपमहानगरपालिका
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिलामैत्री बस सञ्चालनको तयारी गरेको छ । करीब रु साढे तीन करोडमा साता बस खरीद गरी सञ्चालनका लागि कार्य्विधि निर्माणकार्य भइरहेको उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बस सेवा सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले कार्य्विधि निर्माणसँगै चालक छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । मङ्गलबार चालक छनोटका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइएको रिजालले जानकारी दिनुभयो । चालक छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यलय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालयको सहयोगमा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
ज्ञानेन्द्र मल्लको विस्फोटक ब्याटिङसँगै नेपालले मलेसियालाई ७ विकेटले हराएको छ र टी–२० विश्वकप छनोटको एसिया फाइनलमा पहिलो जित हात पारेको छ ।
वर्षाका कारण ९ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा मलेसियाले दिएको ८४ रनको लक्ष्य नेपालले ६ बल बाँकी छँदा ३ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।
नेपालका मल्लले अर्धशतक बनाए । आक्रामक पारी खेलेका उनले २१ बलको सामना गरेका उनले ५ चौका र ३ छक्काको मदतमा ५१ रन बनाएका हुन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सहयोगका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकामा सहयोग समिति गठन गरिएको छ । मङ्गलबार गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङको संयोजकत्वमा ४६ सदस्यीय गाउँपालिकास्तरीय सर्वपक्षीय सहयोग समिति गठन गरिएको हो ।
समितिमा जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायत छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले समग्र जिल्लाको गौरवका लागि सबै मिलेर गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको कामलाई सफल बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले रङ्गशाला निर्माणको सहयोगका लागि चितवनका सबै स्थानीय तहमा समिति गठन गरिने बताउनुभयो ।
सामाजिक अभियानकर्मी कलाकार ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन’का अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले दुई वर्ष्भित्रै क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्नो मानसपटलमा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले कुनै द्विविधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच रङ्शालाको निर्माणकार्य मङ्गलबारबाट पुनः शुरु भएको छ । सडक विस्तारको माग गर्दै केही असन्तुष्ट स्थानीयवासीले जेठ १५ गते रङ्गशालाको केही तारबार भत्काएपछि निर्माणकार्य स्थगित भएको थियो । त्यसपछि भएको विभिन्न चरणको छलफल र सरोकारवाला पक्षको आग्रहपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले पुनः काम शुरु गरेको हो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस, प्रदेश सांसद विजय सुवेदीलगायतले पुनः रङ्गशाला निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो ।
केही दिनमै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रतिबद्धता घोषणा भएको रकम जतिसक्दो चाँडो हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने तथा विभिन्न समिति निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने फाउण्डेशनले जनाएको छ । रङ्गशाला निर्माणको लागत रु तीन अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
गज्जवको जोडी, बेहुला २ फिट बेहुली ६ फिट
चिया नपिई कामै नगर्ने कस्तो घोडा हो यो ?